Ipotifoliyo ye-Adobe: Yakha kwaye ubambe iPortfolio yakho ekwi-Intanethi | Martech Zone
Ipotifoliyo ye-Adobe: Yakha kwaye ubambe iPortfolio yakho ekwi-Intanethi
NgeCawa, ngo-Epreli 24, 2016 NgeCawa, ngo-Epreli 24, 2016 Douglas Karr
I-Adobe iyayikhaba inyani umdlalo wabo we-Intanethi. Kudala sisebenzisa iLifu lokuDala kwiminyaka embalwa ngoku kwaye sizifumana samkela ubuchwepheshe be-Adobe ngakumbi nangakumbi. Ngoku iAdobe isungule eyayo Portfolio indawo, isisombululo esifanelekileyo kubaphulaphuli bayo ekujolise kubo abayili kunye neearhente. Ukongeza ekusebenziseni igama lakho lesizinda, umhleli wePotifoliyo yeAdobe ubonelela ngezi zinto zilandelayo:
Ukongeza kokusebenzisa igama lakho lesizinda, I-Adobe Portfolio inikeza ezi zinto zilandelayo:
Ukufikelela Uhlobo lohlobo Ithala leencwadi lamagama.
Ukuhlela okubukhoma kukuvumela ukuba ubone utshintsho lwakho njengoko usenza.
Ukufikelela ngokuthe ngqo: Nantoni na oyibonayo, unokuyihlela.
Jonga kuqala iwebhusayithi yakho ngokuphendula kwidesktop, kwithebhulethi nakwiselfowuni.
Yenza iiprojekthi kwiPotifoliyo okanye Behance kunye nokuvumelanisa phakathi kwezi zimbini.
Ukukhetha ukukhubaza ucofa ekunene ukukhusela imifanekiso yakho.
Inketho yokwenza umboniso webhokisi yokukhanyisa kwimifanekiso yakho.
Iqonga sele linezinto ezintle, ezilungele ukuhamba, imixholo ephendulayo ibandakanyiwe:
tags: zodakaipotifoliyo ka-Adobeukukhazimlaipotifoliyo ekwi-intanethiportfolioindawo yepotifoliyouhlobo lwekhithi
Iinkcukacha-manani zokuKhula kweMidiya yoLuntu ngo-2015